07/09/13 ~ MOBILE IT NEW
9:53 AM နည်းပညာများ No comments
ကျွန်တော်တို့ ကွန်ပျူတာ ကိုသုံးနေရင် Hangs တာမျိုး Crashes ဖြစ်တာ မျိုး ကြုံဖူးကြမှာပါ။ ဘာကြောင့်ဖြစ်တာလဲဆိုရင် ကျွန်တော်တို့ မိမိတို့ စက် မှာ မလိုအပ်တဲ့ process တွေ အလုပ်လုပ်နေလို့ ဖြစ်ပါတယ် အဲဒီလို မဖြစ် ရအောင် ဖြေရှင်းနည်း (၁၀) ချက်ရှိတယ်။
1. မိမိတို့ computer မှာ ctrl+alt+ delete key (တစ်ချို့စက်တွေမှာ ctrl+shift+Esc ) နိုပ်ပြီ Task manager ကိုခေါ်လိုက်ပါ။ ပြီရင် processes ထဲမှာ ကို အသုံးမလိုတဲ့ software တွေကို End Process လိုက်လုပ်ပါ။
2. နောက်တစ်ခုက virtual memory တိုးပေးတာဖြစ်ပါတယ်။ ကျွန်တော်တို့ program တွေ အများကြီး run ထားတဲ့အခါ virtual memory မလုံလောက် တဲ့အတွက် စက် Hangs တာမျိုးတွေ ဖြစ်တက်ပါတယ်။
3. နောက်တစ်ခုကတော့ ကျွန်တော်တို့ Browser တွေရဲ့ History တွေကို ဖျက်ထုတ်တာဖြစ်ပါတယ်။ ccleaner software နဲ့ ဖြေရှင်းက အတော် ကောင်းတယ်။ software မသုံးချင်တဲ့ သူငယ်ချင်းများအတွက် Internet explorer မှာ Tools ဆိုတာ တွေ့ကြမှာပါ။ အဲဒီမှာ internet option ထဲက General မှာ clear History ကို click လိုက်ပြီ ok ပေးလိုက်တာပါ။ Firefox မှာလဲ ကျွန်တော်တို့ option ထဲက privacy ထဲမှာ private ထဲက setting မှာ ကျွန်တော်တို့ clear ပေးလိုက်ပါ။ Browser History တွေကို ပြောတာနော်။
9:51 AM computer Software No comments
ဒါကတော့ Photoshop CS5 Portable ပါ။ အရင်က တင်ပေးထားတာက 120 MB ကျော်ပါတယ်။ အခုဖိုင်ကတော့ 80 MB ကျော်လေးပဲ ရှိပါတယ်။ ဖိုင်ဖြေလိုက်ရင်တော့ 300 MB ကျော် ထွက်လာပါလိမ့်မယ်။ သုံးလို့ အရမ်းအဆင်ပြေပါတယ်။ လိုချင်တဲ့သူများ အောက်မှာ Download လုပ်ထား လိုက်ပါ။ အခုလို portable လေးတွေ ရှိထားတော့ ကိုကြိုက်တဲ့ ကွန်ပျူတာမှာ install လုပ်စရာမလိုဘဲ အသုံးပြုလို့ရတာပေါ့။ အရေးအကြောင်းဆို portable လေးတွေက အရမ်းအသုံးဝင်ပါတယ်။ ပြီးတော့ အခု cs5 portable လေးက window 8 နှင့်ပါ အဆင်ပြေပြေ သုံးနိုင်ပါတယ်။ လိုချင်တဲ့သူများ အောက်မှာ Download လုပ်လိုက်ပါ။
Zippyshare | Solidfiles | Ziddu | Sharebeast | Tusfiles | Mirrorcreator | Fileswap
ညီနေမင်း မှ ပြန်လည်မျှဝေသည်.။
Driver ပေါင်း သိန်း 20 အထက်ပါဝင်တဲ့ Driver Navigator v3.3.2.21605 Multilanguage (x32,x64) + Keygen
9:42 AM Driver များ No comments
အခုတင်ပေးလိုက်တဲ့ Driver Navigator ကိုတော့ ဆောင်ထားစေချင်ပါတယ်ဗျာ။ ကွန်ပြူတာ Service သမားတိုင်းဆောင်ထားသင့်တဲ့ Software တစ်မျိုးဖြစ်ပါတယ်ဗျာ။ ဒီ Software လေးက သေးသေးလေးနဲ့ Driver ပေါင်း သိန်း 20 ကျော်ပါဝင်ပါတယ်ဗျာ။ အသုံးပြုပုံကလည်းလွယ်ကူပါတယ်။ Install လုပ်ပြီး Scan Now နှိပ်လိုက်တာနဲ့ မိမိကွန်ပြူတာအတွင်းမှာလိုအပ်နေတဲ့ Driver တွေကို ရှာဖွေပြီး Install လုပ်ပေးနိုင် မှာဖြစ်ပါတယ်ဗျာ။ လိုအပ်နေတဲ့ Driver တွေကို Install လုပ်ဖို့အတွက်တော့ အင်တာနက်ကွန်နရှင်ရှိထား ဖို့တော့လိုအပ်ပါတယ်ဗျာ။ Windows XP / Vista / Windows7/ Windows 8 (32bit & 64bit) စတာတွေ အားလုံးမှာ အလုပ်လုပ်နိုင်ပါတယ်ဗျာ။
Windows 8 တင်နည်း
9:40 AM windows တင်နည်း, windwos တင်နည်းများ No comments
မင်္ဂလာပါ။ဒီတစ်ခါ ကျွန်တော်တို့ Windows 8 ကို Install လုပ်နည်း ကိုပုံနဲ့ တကွရှင်းပြမှာ ဖြစ်
ပါတယ်။တကယ်လို့ သင်ဟာ Windows 8 သွင်းမယ်လို့ ဆုံးဖြတ်လိုက်ပြီး ဆိုရင် ဒီ Post ကသင့်အတွက် လုံးဝ အသုံးဝင်မယ်လို့ အာမခံပါတယ်။ကဲ Windows 8 ကိုဘယ်လို တင်ရလဲဆိုတာကို ကြည့်ရအောင်။
သင့်ရဲ့ File များကို Backup အရင်လုပ်ပါ။
ဟုတ်ကဲ့ Windows 8 ကိုမတင်ခင် သင့်ရဲ့ အရေးကြီးတဲ့ File များကို Backup အရင်လုပ်ထားသင့်ပါတယ်။
ဥပမာ-သင့် Computer ရဲ့ Partition တစ်ခုခုထဲ ပဲဖြစ်ဖြစ် ၊ External Hard Disk ထဲပဲဖြစ်ဖြစ် ဒါမှမဟုတ်
DVD အခွေထဲတွေမှာ သင့်ရဲ့ အရေးကြီး တဲ့ Data တွေကို Backup လုပ်ထားသင့်ပါတယ်။
ကဲ Windows 8 ကို တင်ရအောင်။
သင့်ရဲ့ PC ကို Restart ချပါ။ စက်ပြန်တတ်တတ်ချင်း F2 (သို့) Delete ကိုနှိပ် ပြီးရင် First Boot Device မှာ သင့်ရဲ့ DVD Drive ကိုထားပါ။ဒါမှမဟုတ် F12 ကိုနှိပ်ပြီး DVD Drive ကိုရွေးပါ။ပြီးရင်
ပုံ မှာပြထားတဲ့ ပေါ်လာပြီး အဲ့ဒီနေရာမှာ Second အနည်းငယ်ကြပါလိမ့်မယ်။
9:33 AM backup လုပ်နည်းများ No comments
ဒါလေးကတော့ Creating System Repair Disc တစ်ခုဖန်တီးယူတဲ့ နည်းလမ်းလေးပါ.... DVD အခွေလွတ်တစ်ချပ်ထဲမှာ
System Repair Disc အဖြစ် Data တွေကို သိမ်းထားနိုင်ပါတယ်... အကြောင်းအမျိုးမျိုးကြောင့် မိမိစက် Window မတတ်နိုင်တာမျိုးတွေကို ရှိခဲ့ရင် အဲ့ဒီ DVD နဲ့ System Repair လုပ်နိုင်သလို Restore ပါပြန်လုပ်ပေးနိုင်ပါတယ်...။
အကယ်၍ မိမိ စက်မှာ CD/DVD Drive မပါခဲ့ရင် နံပါတ် (၁) က ပုံမှာ အပေါ်က Createasystem image ကိုနှိပ်ပြီး D,F,G Partition တစ်ခုခုထဲမှာ System Image ဖိုင်လ်အဖြစ် Back Up လုပ်ယူ သိမ်းထားနိုင်ပါတယ်... မိမိ သိမ်ထားမဲ့ Partition မှာ Data အနည်း အများပေါ်မူတည်ပြီး Space လုံလုံလောက်လောက်ရှိဖို့ လိုအပ်မှာပါ...
ပုံလေးတွေနဲ့ ရိုးရှင်းစွာ ရှင်းပြထားတာမို့ အဆင်ပြေမယ်လို့ မျှော်လင့်ပါတယ်...။
အောက်မှာဖေါ်ပြထားတဲ့ နည်းလမ်းနဲ့ အဆင်မပြေခဲ့ရင် Backup and Restore ပြုလုပ်နည်းကို ဒီနေရာမှာ ပုံလေးတွေနဲ့ တဆင့်ချင်းရှင်းပြထားတာကို ဆက်လက် လေ့လာနိုင်ပါတယ်....။
9:29 AM computer Software2comments
ဒီ software လေးကတော့ အားလုံးသိလောက်မယ်ထင်တယ်
Driver ပျောက်နေတာတို့ update မဖြစ်တော့တာတို့ကို
ကို အလွယ်တကူ လုပ်ဆောင်နိုင်ပါတယ်။
Data Doctor Recovery SIM Card V3 တင်ပေးလိုက်ပါတယ်
9:16 AM Recovery No comments
Command box မှာ အစ်ကိုတစ်ယောက်က SMS message တွေကိုပြန်လိုချင်တယ်ဆိုတာတွေ့လို့
Data Doctor Recovery SIM Card V3 လေးတင်ပေးလိုက်ပါတယ်။ အသုံးပြုပုံကလည်း လွယ်ကူတဲ့အ
တွက် ထူးထူးထွေထွေပြောမနေတော့ပါဘူုးနော်.. SIM Card ကို SIM Card Reader ထဲထည့်ပြီး အသုံးပြုရမှာဖြစ်ပါတယ်။ ပျောက်ဆုံးသွားတဲ့ Contact Number တွေ Message တွေကိုပြန်လည်ရှာဖွေပေးနိုင်ပါလိမ့်မယ်ခင်ဗျာ။
Windows 7,8 Repair Disc ဖြင့် Windows ပြန်မတက်တဲ့ ပြဿနာများကိုရှင်းမယ်
9:11 AM computer error No comments
ဒီကောင်လေးက ဝင်းဒိုး Boot ပြန်မတက်တာ Blue Screen Error တက်နေတာ ဝင်းဒိုး Restart ခဏခဏကျတာတွေအတွက်ပြန်လည်ကောင်းမွန်အောင် စွမ်းဆောင်ပေးနိုင်တယ်လို့ ဆိုပါတယ်။ကျွန်တော်ဖြစ်တဲ့ပြဿနာလေးကို ပြောပြချင်ပါတယ်။
ကျွန်တော်လက်တော့တစ်လုံးကို အခြားနိုင်ငံတစ်ခုကနေမှာလိုက်ပါတယ်။Dell Inspiron 2nd generation Intel Core i7 အမျိုးအစားပါ။ Genuine Win7 Home Premium 64 Bit Service Pack1 နှင့်ပါ။ရောက်လာတော့
Partation တစ်ခုတည်းဖြစ်နေလို့ထုံးစံအတိုင်း MyComputer > Manage ကနေ၀င်ပြီးတော့ Partation တွေခွဲပါတယ်။အရင်လည်းလုပ်နေကျပါ။ပြီး Restart ချလိုက်တဲ့အခါမှာတော့ Windows ပြန်တက်မလာတော့ဘဲနဲ့ 
BOOTMGR is missing စာကြောင်းရယ် Press Ctrl+Alt+Del to restart ဆိုတဲ့စာကြောင်းနဲ့Screen မဲမဲကြီးကပေါ်လာပါတယ်။သူပြောသလို Restart လုပ်တာလည်းမရပါဘူး။တော်တော်စိတ်ညစ်သွားတာပါ။ကိုယ့်မှာရှိတဲ့ ဝင်းဒိုးနဲ့ ပြန်တင်ရင် ရပေမဲ့ သူ့ စက်ထဲမှာထည့်ပေးလိုက်တဲ့ Software လေးတွေကို သဘောကျနေလို့ ဝင်းဒိုးအသစ်လည်းပြန်မတင်ချင်တာနဲ့အခြားစက်တစ်လုံးနဲ့ ဂူဂဲလ်ထဲမှာရိုက်ရှာပြီး အလားတူပြဿနာမျိုးတွေဖြေရှင်းထားတဲ့ ဗီဒီယိုဖိုင်တွေကို Youtube မှာကြည့်တော့ဒီ Windows7Repair Disc ဆိုတာလေးနဲ့ ဖြေရှင်းတာကိုတွေ့တာနဲ
Online ပေါ်မှာတစ်နေ့ကို မိနစ် 30 အချိန်ပေးပြီးငွေရှာနည်း စာအုပ် ( ဒုတိယပိုင်း ) ထွက်ပြီ
12:26 AM နည်းပညာစာအုပ်များ 1 comment
မင်္ဂလာပါ...Online ပေါ်မှာတစ်နေ့ကို မိနစ် 30 အချိန်ပေးပြီးငွေရှာနည်း စာအုပ် ဒုတိယပိုင်းထုတ်ဝေပေး
လိုက်ပါပြီ..ဒီစာအုပ်မှာ ပထမစာအုပ်တုန်းက အမေးအများဆုံးမေးခွန်းအချို့ကို အကျဉ်းချုပ်ဖြေပေးထားသလို..အဓိက အမေးအများဆုံးဖြစ်တဲ့ ပိုက်ဆံတွေကို PayPal ဆီသို့မည်သို့မည်
ပုံ Cash Out ( ငွေထုတ် ) ရမည့်နည်းလမ်းကိုလည်း သေချာရှင်းလင်းထားပါတယ်...ကဲ ဒုတိယပိုင်းမျှော်နေပါတယ်ဆိုတဲ့ သူများအတွက် တင်ပေးလိုက်ပါပြီခင်မျာ..အရေးအသား အမှားပါရင်လည်း
သီးခံခွှင့်လွှတ်ပေးကြပါ..ကျနော်လဲ လေ့လာနေဆဲသူတစ်ယောက်မလို့ပါခင်မျာ :)
Windows 7,8 Repair Disc ဖြင့် Windows ပြန်မတက်တဲ့ ...
Online ပေါ်မှာတစ်နေ့ကို မိနစ် 30 အချိန်ပေးပြီးငွေရှ...